के रिचार्ज कार्ड नङले कोर्दा क्यान्सर हुन्छ? | Mahesh Pathak
के हो सिल्भर नाइट्रो अक्साइड?
अचम्मको कुरा यो छ कि सिल्भर नाइट्रो अक्साइड भन्ने रसायनको अहिलेसम्म बनेको रहेनछ। यो नामसँग नजिकको अस्तित्वमा रहेका दुई रसायनहरु नाइट्रस अक्साइड र नाइट्रीक अक्साइडको सिल्भरसँग कुनै संबन्ध रहेनछ। अर्थात, सिल्भर नाइट्रो अक्साइड संबन्धी सबै हल्ला निराधार हुन्।
केबाट बनेको हुन्छ त रिचार्ज कार्डको कोट्याउनु पर्ने भाग?
रिचार्ज कार्डको कोट्याउनु पर्ने भाग विशेष प्रकारको ल्याटेक्सबाट बनेको हुन्छ। यसलाई UV ink पनि भनिदो रहेछ। र यसको क्यान्सरसँग कुनै संबन्ध रहेनछ। वास्तवमा हामीले प्रयोग गर्ने धेरै कुराहरु ल्याटेक्सबाट बनेका हुन्छन् जस्तै मेडिकल ग्लोभ्स, बेलुन, कण्डम, आदि। यदि, ल्याटेक्सले क्यान्सर हुने भए, संसारभर क्यान्सरको महामारी हुनु पर्ने, होइन र?
कसै-कसैलाई ल्याटेक्सले एलर्जी पनि हुन हुन सक्ला। ती व्यक्तीहरुले भने सिक्काले रिचार्ज कार्ड कोर्दा नै राम्रो।
नङले रिचार्ज कार्ड कोर्दा नङ फोहोर हुन्छ। त्यसैले, सिक्काको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर ढुक्क हुनुहोस्, नङले रिचार्ज कार्ड कोर्दैमा तपाईलाई क्यान्सर चाहीं हुँदैन। 🙂
यसो भन्छ गुगल
← जोया प्रती जुन भाव जागेको छ, सबै विदेशी पाहुना प्रती जागोस	समानुभुती – एक विवेकशील मन्त्र →